Zọ ziri ezi ị toụ mmiri maka ịnyịnya n'èzí
Nchịkọta mmiri nke ụmụ nwoke nkịtị bụ ihe dị ka 60%, mmiri ụmụ nwanyị dị 50%, mmiri nke ndị na-eme egwuregwu dị elu dịkwa nso na 70% (n'ihi na mmiri nke akwara dị elu dị ka 75% na ọdịnaya mmiri) nke abụba bụ naanị 10%). Mmiri bụ mmiri kacha mkpa n’ọbara. Ọ nwere ike ibuga nri, oxygen, na homonụ na mkpụrụ ndụ ma wepụ ngwaahịa sitere na metabolism. Ọ bụkwa akụkụ dị mkpa nke usoro nhazi okpomọkụ nke ahụ mmadụ. Mmiri na electrolytes na-esonye na njikwa nke nrụgide osmotic mmadụ ma na-edozi ahụ mmadụ. Yabụ otu esi agbakwunye mmiri n'oge mmega ahụ bụ iwu dịịrị onye ọ bụla na-agba ya.
Nke mbụ, echela ị drinkụ mmiri ruo mgbe akpịrị na-akpọ gị nkụ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe mmadụ omume ị toụ mmiri zuru oke iji kwado ahụ mmiri dị gara gara n'oge mmega ahụ. Ọnwụ nke ahụ mmadụ mgbe ọ na-emega ahụ ogologo oge ga-eduga na nrụgide osmotic plasma dị elu. Mgbe akpịrị kpọrọ anyị nkụ, ahụ anyị efularịrị ihe dị ka 1.5-2L mmiri. Karịsịa n'ịgba ịnyịnya na gburugburu ebe mmiri na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, ahụ na-efunahụ mmiri ngwa ngwa, na-eme ka ahụ ghara ịgwụ mmadụ ngwa ngwa, nke ga-eduga n'ịbelata nwayọ nwayọ n'ọbara ya, na-ebelata ọsụsọ, na ọnụego obi ọsọ ọsọ, na-eduga na mmalite ọdịdị nke ike ọgwụgwụ. Enwekwara ike ịnwe angina pectoris na-eyi ndụ egwu. Yabụ, enweghị ike ileghara ịnyagharị oge ọkọchị iji mejupụta mmiri. Na-amaja ileghara ịdị mkpa nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ n'oge a?
Ya mere, otu esi a drinkụ mmiri bụ eziokwu? Ọbụna mgbe ị na-amalitebeghị ịgba ịnyịnya, ị kwesịrị ịmalite ịmalite ị drinkingụ mmiri iji mee ka mmiri ghara ịdị na-edozi ahụ. Obere oge ka mmiri a toụrụma n’oge ịgba ịnyịnya ígwè ka ahụ anyị wee nwee ike iji rụọ ọrụ, ogologo oge nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ nwere ike ibute mmiri ahụ, ka ọ ghara ịmịchaa mmiri. Ụ mmiri naanị ma ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ gị nkụ ga-eme ka ahụ́ gị nọrọ n’ọnọdụ dị ụkọ mmiri ruo ogologo oge. Ya mere, a na-atụ aro ka ị na-ejupụta mmiri ọ bụla na nkeji iri na ise ọ bụla mgbe ị na-agba ịnyịnya n’oge ọkọchị. Ọ bụrụ na ọ bụ usoro ọzụzụ ike dị elu, a na-atụ aro ka ị na-ejupụta mmiri otu ugboro kwa nkeji 10. Obere na ọtụtụ oge. Ya mere, ị ga-ewetara oberekarama egwuregwu ma ọ bụ akpa mmiri mgbe ị na-agba n'èzí. Ngwaahịa dị mfe iji mee ka ị banyejupụta mmiri oge ọ bụla na ebe ọ bụla mgbe ị na-emega ahụ, ọ naghị ebute gị ibu arọ.